Vane nhamo vaya vasingatirimuki! (1-14)
Mibhedha yakagadzirwa nenyanga dzenzou; midziyo yewaini (4, 6)
6 “Vane nhamo vaya vanovimba nepfungwa dzavo* muZiyoni,Vaya vanofunga kuti hapana chinovawana mugomo reSamariya,+Ivo varume vane mukurumbira verudzi runopfuura mamwe marudzi ese,Vaya vanovimbwa navo neimba yaIsraeri! 2 Endai kuKarine muone. Pamunobva ikoko, endai kuHamati, guta guru,+Modzika kuGati, guta revaFiristiya. Maguta aya ari nani pane umambo uhwu* here,Kana kuti nharaunda yawo yakakura kupfuura nharaunda yenyu here? 3 Muri kuita kuti pfungwa dzenyu dzisafunga nezvezuva rekutambudzika here?+Uye muri kurega utongi hunotsigira mhirizhonga huchiva pakati penyu here?+ 4 Vanorara pamibhedha yakagadzirwa nenyanga dzenzou+ uye vanogara pazvigaro zvavo vakazorora zvavo,+Vachidya makondohwe nemhuru dzakakodzwa;*+ 5 Pavanonzwa kurira kwerudimbwa* vanobva vatomutsa karwiyo,+Uye vanogadzira zviridzwa saDhavhidhi;+ 6 Vanonwira waini mumidziyo mihombe+Uye vanozora mafuta akanaka kwazvo. Asi havana basa nedambudziko raJosefa.+ 7 Saka ndivo vachatanga kutapwa,+Uye mafaro akanyanya ari kuitwa nevaya vagere pazvigaro zvavo vakatambarara achaguma. 8 ‘Changamire Ishe Jehovha apika naiye pachake,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha Mwari wemauto,‘“Ndinosema kudada kwaJakobho,+Uye ndinosemburwa neshongwe dzake dzakavakwa zvakasimba,+Uye ndichaisa guta racho nezvinhu zvizere mariri mumaoko emuvengi.+ 9 “‘“Kana pakava nevarume gumi vanosara muimba imwe chete, naivowo vachafa. 10 Hama yavo ichauya kuzovatakura ichivabudisa kunze kuti ipise mumwe nemumwe wavo. Achabudisa mapfupa avo mumba macho; achabva ati kune chero munhu anenge ari muimba yemukati, ‘Uchiri nevamwe vaunavo here?’ Iye achati, ‘Hamusisina!’ Iye oti, ‘Urambe wakanyarara! Nekuti ino haisi nguva yekutaura zita raJehovha.’” 11 Nekuti Jehovha ndiye ari kurayira,+Uye achaputsa imba huru yosara yangova murwi,Uye imba diki yosara yati mwarara.+ 12 Mabhiza anomhanya paruware here,Kana kuti munhu angaparima nemombe here? Nekuti makachinja kutonga kwakarurama mukaita kuti kuve muti une muchetura,Uye muchero wekururama kuti uve kamuti kanovava.+ 13 Munofarira zvinhu zvisingabatsiri,Uye munoti, “Simba ratinaro hatina kuriwana tega here?”+ 14 Saka imi imba yaIsraeri, ndichakuunzirai rudzi ruchakurwisai,’+ ndizvo zvinotaurwa naJehovha Mwari wemauto,‘Uye ruchakudzvinyirirai kubva kuRebhohamati*+ kusvika kuRwizi* rweArabha.’”
^ Kana kuti “vasingatirimuki.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva umambo hweJudha nehweIsraeri.
^ Kana kuti “nemikono midiki yemombe.”
^ Kana kuti “kwechiridzwa chine tambo.”